Parirenyatwa: Kasila Ebola Isigulane Esisesibhedlela seWilkins
Udaba lokuthi kulomuntu onakanelwa ukuthi engabe elomkhuhlane oweEbola edolobheni leHarare luke lwethusa abantu abanengi esigodlweni. Lokhu kwenze iziphathamandla zezempilakahle ziphange ukwethulwa umbiko othi lumuntu ufunyanwe elomkhuhlane woquqo owe Malaria hatshi owe Ebola kodwa lokhe esahlolisiswa ukuthi akala gcikwane na ele Ebola njengenyathelo lemizamo yokuvimba ukungena kwalumkhuhlane elizweni.
Umpathintambo wezempilakahle uDr David Parirenyatwa utshele umhlangano lentathelizindaba ukuthi lumuntu kayisiso sizalwane seZimbabwe njalo usesibhedlela seWilkins Hospital, olwegazi eselithunyelwe kwele South Africa ukuyahlolisiswa. Wakhuthaza uzulu ukuthi engethuswa yikuba kwalesi sigulane esibhedlela seWilkins njalo ezinye izigulane sezisiwe eParirenyatwa lase Betreace Hospital.
Inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization ithi umkhuhlane oweEbola usubulele abantu abangaba zinkulungwane ezedlula ezine emazweni angetshonalanga kwezwekazi leAfrica ikakhulu kwele Liberia, Guenea leSierra Leaone.